Posted by လင်းပန်းအိမ် on Sunday, September 11, 2011
Labels: ကဗျာ / Comments: (2)
Posted by လင်းပန်းအိမ်
Labels: ဝထ္တုတို / Comments: (0)
ဒီနေရာလေးထဲကိုယ်ခြေအချမှာ သူကမငြင်းဆန်ပေမယ့် စိမ်းကားပြတ်တောက်စွာလက်ခံရှာသည်။ သူကိုယ့်ကိုစိတ်နာသွားပြီထင်သည်။သူ့ကိုမေ့လျော့စွန့်ပစ်သွားပြီဟု ထင်ထားခဲ့ပုံရ၏။ ကိုယ်ကလည်းကိုယ် ပဲလေ။သူ့ရဲ့နှစ်ပတ်လည်ကိုတောင် သတိတရမရှိနိုင်လောက်အောင် မေ့လျော့လျစ်လျူရှု ထားခဲ့သည်ကိုး။
တည်မှုကိုတောင် ရှာမတွေ့တော့သည့်အခြေအနေမှာ သူ့ကိုဂရုတစိုက်ခြယ်သလိုစိတ်တွေ ကင်းဝေးခဲ့တာ ကာလအတန်ကြာနေပြီမှန်းကိုယ်သိပါသည်။ခွန်အားနုံနည်းသည့်ကိုယ်က အခုလိုပဲသူ့ကိုအခါခါစွန့်ပစ်ထား
ခဲ့တတ်တာမို့ သူကအကြောင်းသိပီပီ ဖက်လှဲတကင်းမရှိလှပေမယ့် ငြူစူစွာဖြင့်တော့ လက်ခံခဲ့သည်ပဲ။အဲဒီ
အတွက်တော့သူ့ကိုလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကျေးဇူးတင်မိရသည်။ဒီတစ်ခါလည်း ဘယ်လောက်ကြာကြာ သူ့အနား
မှာရှိလို့ဘယ်ချိန်စွန့်ခွာသွားဖြစ်အုံးမည်ဆိုတာဘာသာလည်းမသိသည်မို့ မရေရာတဲ့ကတိတွေမပေးချင် တော့ပေ။သို့သော်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ရာ ဒီနေရာလေးကို မည်သူတွေသိသည်ဖြစ်စေ၊မသိသည်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်က
တော့တွယ်တာသည်။ချစ်မြတ်နိုးသည်။ကိုယ့်စိတ်ရဲ့နားခိုရာလည်းဖြစ်၊ကိုယ့်ရဲ့ရင်ဖွင့်ရာ၊ထွက်ပေါက်ပေး ရာလည်းဖြစ်တဲ့သူ့ကို ဘယ်သောအခါမှ အပြီးတိုင်စွန့်ခွာမသွားဖြစ်မှာတော့ သေချာပါသည်။
(ကျမဘလော့လေးကိုလပေါင်းများစွာစွန့်ပစ်ထားရာက အမှတ်ရလာတာမို့ ဒီပို့စ်လေးတင်ဖြစ်သွားပါတယ်။)
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Thursday, June 23, 2011
Labels: ဘာသာပြန်စာစုလေးများ / Comments: (0)
တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့လိပ်စာစာအုပ်ထဲမှာ နေရာရဖို့လွယ်ကူပေမယ့် တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့အသဲနှလုံး မှာနေရာရဖို့ကတော့ခက်ခဲတယ်......
ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အချစ်အတွက်အလွယ်တကူပူဆွေးတတ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒီအချစ်ကိုမဆုံးရှုံးရ အောင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ဖို့အတွက်တော့ခက်ခဲတတ်ကြတယ်။
ဘဝတိုးတက်ရေးကိုစိတ်ကူးယဉ်တွေးတောရတာလွယ်သလောက် အတွေးကိုရပ်၊ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ခက်ခဲတယ်။
အောင်မြင်မှုကိုအလွယ်တကူထုတ်ဖော်ဝံ့ကြွားတတ်ကြပေမယ့်အရှုံးကိုရဲရဲဝင့်ဝင့် ရင်ဆိုင်ဖို့ကျ ခက်ခဲတယ်။
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Sunday, May 8, 2011
ကျွန်တော်ကြားနေရတယ်......တခါတလေဆိုမေမေ့နံမည်ကို တ နေတတ်တယ်....ဒါပေမယ့်ဖေဖေဘာလို့
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Tuesday, April 19, 2011
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Thursday, March 31, 2011
Labels: ဝထ္တုတို / Comments: (1)
`ဒီနေ့ April fool ကွ........... ဟုတ်ပြီ ............သူငယ်ချင်းတွေကိုအရူးလုပ်ရမယ်။`
ကျမနားကဖြတ်သွားသည့်ကောင်လေးတသိုက်ပြောသွားခြင်းဖြစ်သည်။April fool ဆိုသည့်စကား
တချိန်ကကျမလည်း April fool မှာပျော်ရွှင်တတ်ခဲ့သည်။သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများ
ကိုနောက်ရင်းပြောင်ရင်းဖြင့်လှပသည့် April fool နေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူး၏။ကျမ၏မရိုးနိုင်သောနောက်
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Sunday, March 27, 2011
Labels: ကြုံရဆုံရလူ့ဘဝ / Comments: (3)
တာမို့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ငွေကြေးကျစ်လစ်ပုံကလည်းအကြီးဆုံးငွေစက္ကူကမှ ၂၀ တန်ရယ်။
ရတဲ့သူကိုလည်း cashier ခန့်ရတာပဲ။ဘာဘွဲ့၊ဘာအောင်လက်မှတ်မှမလိုဘူး။အဲလိုဘဝပေးကုသိုလ်ကောင်း
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Thursday, March 17, 2011
Labels: ဝထ္တုတို / Comments: (5)
Labels: ဘဝအပိုင်းအစ / Comments: (2)
လို့မြူးလို့ပေါ့။လူတိုင်းနှင်းဆီပန်းကိုယ်စီနဲ့ဆိုတော့ကျမလည်းလိုချင်လာတယ်။ပန်းရသွားတဲ့သူတွေကိုအား ကျအကြည့်နဲ့ကြည့်ရုံအားမရပဲအဖော်အမ ကိုပါတီးတိုးပြောမိတယ်။ခုလိုခွဲခြားဆက်ဆံတာတော့မကောင်း
စာကြွင်း ။ ဒီစာလေးကိုရေးထားတာတော့ကြာပါပြီ။ဒါပေမယ့်လည်းအကြောင်းကြောင်းကြောင့်တလ
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Thursday, March 10, 2011
Labels: ကဗျာ / Comments: (0)
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Tuesday, February 8, 2011
Labels: ဝထ္တုတို / Comments: (2)
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Monday, January 24, 2011
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Thursday, December 23, 2010
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Monday, December 20, 2010
လက်လွတ်စပယ်စကားတစ်ခွန်းကြောင့်ရန်စပွားချင်ပွားသွားနိုင်တယ်။ရက်စက်တဲ့စကားကြောင့်ဘဝ တခုစုတ်ပြတ်ကောင်းစုတ်ပြတ်သွားနိုင်တယ်။အချိန်ကိုက်ပြောလာတဲ့စကားကြောင့်စိတ်ရှုတ်ထွေး ကောင်းရှုတ်ထွေးသွားနိုင်တယ်။ဒါပေမယ့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာစကားကတော့ချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်မှုမှတပါး တခြားဘာကိုမှ မပေးပါဘူး။
ကျမတို့ဟာတခါတရံမှာအတွေ့လေးတစ်ချက်၊အပြုံးလေးတစ်စက်၊အကြင်နာစကားလေးတစ်ခွန်း စတဲ့အသေးအဖွဲလေးတွေကိုအထင်သေးတတ်ကြတယ်။အဲဒီမဖြစ်စလောက်အရာလေးတွေကြောင့် ပဲဘဝတခုလုံးကိုတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်တာကိုတော့သတိမေ့နေကြတယ်။
Labels: ဘဝအပိုင်းအစ / Comments: (0)
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Thursday, December 16, 2010
Labels: ဟာသလေးများ / Comments: (0)
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Tuesday, December 14, 2010
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Monday, December 6, 2010
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Wednesday, October 27, 2010
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Monday, October 25, 2010
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Thursday, October 21, 2010
` Ridge Hall Computer Service Centre ကပါ။ဘာများကူညီရမလဲခင်ဗျာ။`
` word ထဲမှာစာရိုက်ရတာပြဿနာလေးနည်းနည်းရှိနေလို့ပါ။`
`နေပါစေတော့။ခင်ဗျား screen ပေါ်မှာ c:/document ဆိုတာမြင်ရလား။`
`ဘာလဲ sea-document ဆိုတာ။`
`ကိစ္စမရှိဘူး။cursor ကိုရောscreen ပေါ်မှာဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့လုပ်လို့ရလား။`
`screen ပေါ်မှာဘာ cursor မှမရှိဘူး။ကျွန်တော်ပြောတယ်လေ။ဘာမှရိုက်လို့မရပါဘူးဆိုမှ။`
`ဒါဆို monitor မှာရောပါဝါမီးလင်းနေလား။`
`တီဗွီလိုဖန်သားပြင်နဲ့က monitor ပေါ့။ခင်ဗျားပါဝါဖွင့်တော့ monitor ကနည်းနည်းလင်းလာလား။`
`ဒါဆိုရင် monitor နောက်ဘက်ကိုသွားပြီး ပါဝါကြိုးဘယ်ကိုသွားတယ်ဆိုတာကြည့်ကြည့်ပါ။ပါဝါကြိုးကို
`ခင်ဗျား monitor နောက်မှာတုန်းက monitor မှာကေဘယ်လ်ကြိုးနှစ်ခုရှိတာတွေ့မိလား။တစ်ခုတည်း
` ဟုတ်ပြီ။ဒါဆို monitor နောက်ပြန်သွားပြီးကေဘယ်လ်ကြိုးနောက်တကြိုးကိုထပ်ရှာပါအုံး။``
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Tuesday, October 19, 2010
ကိုထည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။coffee maker မပါတဲ့ကော်ဖီပျင်းတွေဟာသင့်ကိုငါးမြှားချိတ်နဲ့ဆွဲချိတ်လိုက်သလိုမျိုး
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Sunday, October 17, 2010
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Friday, October 15, 2010
Labels: လူငယ်များသို့ / Comments: (0)
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Friday, October 8, 2010
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Tuesday, October 5, 2010
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Friday, October 1, 2010
ခင်ပွန်းဖြစ်သူကဝမ်းသာအားရဖြင့် `ဟုတ်လား။ဝမ်းသာလိုက်တာ။ဘယ်တော့လဲဟင်` ဟုမေးလိုက်သည်။
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Thursday, September 30, 2010
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Thursday, September 2, 2010
Labels: လူငယ်များသို့ / Comments: (2)
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Friday, August 20, 2010
Labels: ဘာသာပြန်စာစုလေးများ / Comments: (3)
ကျတော်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ရဲဇနီးဈာပနကိုသွားတော့မိတ်ဆွေဖြစ်သူကဝမ်းပန်းတနည်းငိုကြွေးနေတာကိုစိတ်မကောင်းဖွယ်ရာတွေ့လိုက်ရတယ်။မိတ်ဆွေက သေသေသပ်သပ်ထုပ်ထားတဲ့အထုပ်တစ်ထုပ်ကိုသူဇနီးဗီရိုထဲက ထုတ် လာ ရင်း ဝတ်စုံလေး ကိုသူတို့ဒီနွေမှာဂျာမနီ သွားရင်းဝယ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီဝတ်စုံလေးကိုဇနီးသည်ကအလွန်မြတ်နိုးကြောင်းနဲ့ ဒီဝတ်စုံလေးကိုအခုနှစ်နာတာလူးပွဲမှာဝတ်ရန်စီစဉ် ထားကြောင်း ဆို့နင့်စွာပြောပြနေရှာတယ်။
အဲဒီနေ့ကစလို့ကျတော်ရင်ထဲမှာအသိတစ်ခုရခဲ့တယ်။ဘယ်ပွဲကျမှဒါကိုဝတ်မယ်၊ဘယ်ချိန်ကျမှဒါကိုစားမယ်၊ဘယ်တော့မှဒါကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးသီးသန့်ရည်ရွယ်ထားတာမျိုးမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။ကျတော်တို့အသက်ရှင်နေသမျှ ကာလမှာ စက္ကန့်တိုင်းကအဖိုးတန်လှပါတယ်။
ဒါကြောင့်အခုဆိုရင်ဘယ်လောက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ဝတ်စုံဖြစ်ပါစေဝတ်ချင်ပြီဆိုရင်ညနေခင်းလေညင်း ခံထွက်ရင်းဝတ်ချင်လည်းဝတ်ပစ်လိုက်တာပဲ။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်နံမည်ကျော်တရုတ်စာတွေ
စားချင်တယ်လို့စိတ်ကူးရတာနဲ့ ချက်ခြင်းလုပ်ပစ်လိုက်တယ်။ တခါတလေဆို အလုပ်တွေကိုဘေးဖယ်ထား ပြီးမိသားစုနဲ့ပန်းခြံမှာ၊ဒါမှမဟုတ်အိမ်ရှေ့ဝရန်တာမှာ ဝိုင်းထိုင် စကားပြောတာမျိုးတွေကိုလုပ်ဖြစ်လာတယ်။
ကိုယ့်မိဘကိုဖြစ်စေ၊ ကိုယ့်သားသမီးကိုဖြစ်စေ၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုဖြစ်စေ၊ ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့
ပြောဖြစ်အောင်ပြောလိုက်ပါ။ကျတော်မိတ်ဆွေရဲ့ဇနီးလိုမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်သွားမှ နောင်တရပူဆွေးနေရုံအပြင် ဘာမှတတ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကျတော်တို့ဘဝတွေရဲ့နေ့ရက်တွေတိုင်းဟာအရေးကြီးတဲ့အထူးအခါသမယတွေချည်းပါပဲ။အချိန်ဟာလက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ အဖိုးတန်ရတနာပါ။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝရဲ့အဖိုးတန်ရတနာကိုတွေဝေဆုံ့ဆိုင်းမှုတွေနဲ့ အလဟသမဖြုန်းတီးပစ်ဖို့ ပြောလိုက်ပါရစေ။
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Thursday, August 12, 2010
Posted by လင်းပန်းအိမ် on Wednesday, August 11, 2010
ခုမှစာစရေးသူမို. အမှားပါသွားရင်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ. ကျမစာကိုဖတ်လို.အကျိုးမထူးသွားရင်တောင်အဆိပ်အတောက်မဖြစ်စေဖို. ကြိုးစားပါမယ်
fushigi, exercise ball, illusions
© Copyright လင်းပန်းအိမ်. All Rights Reserved.